METRO & GMBC Donations | METRO
METRO & GMBC Donations
METRO Wholesale Myanmar and GMBC (German Myanmar Business Chamber) donated funds to the Myittar Yaung Chi Youth Development Centre on 26 June at the METRO Showroom. Also, chefs from the Myanmar Chef Association used METRO products to prepare meals for the day for all students and teachers of the same youth development centre. METRO takes pride in being able to serve the community and look forward to further meaningful collaborations.
METRO Wholesale Myanmar နဲ့ GMBC (German Myanmar Business Chamber) တို့ ပူးပေါင်းပြီး မေတ္တာရောင်ခြည် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတဂေဟာ အတွက် အလှူငွေ ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲကို METRO Showroom မှာ ဇွန်လ (၂၆) ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Myanmar Chef Association ရဲ့ စားဖိုမှူးကြီးတွေကလည်း မေတ္တာရောင်ခြည်က ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေနဲ့ ဆရာ၊ဆရာမတွေအတွက် တစ်နေ့တာ စားဖွယ်စုံကို METRO အမှတ်တံဆိပ် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေ အသုံးပြုပြီး ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
METRO အနေနဲ့ အခုလို လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် တဖက်တလမ်းကနေ ပံ့ပိုးနိုင်တာကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိသလို နောက်ပိုင်းမှာလည်း အခုလိုမျိုး ပူးပေါင်းလှုဒါန်းမှုတွေကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။